Gịnị bụ Mkpụrụ Osisi Pulp? | ZHONGSHENG
Ugbu a karia imirikiti gburugburu ebe obibi, ahịhịa pulp tableware, shuga pulp tableware, ahịhịa pulp tableware, achara pulp tableware, na ọbụna kraft akwụkwọ ofe bọket, wdg. Na gburugburu ebe nchekwa tableware na nnukwu ahịa, ọtụtụ ndị ahịa anaghị eme maara Iji mata ọdịiche nke ngwaahịa ndị a, ndị na-esote Akwụkwọ Na-ahụ Maka Akwụkwọ Cup Biodegradable ga-ewebata gị obere oge.
Pulp tableware bụ ihe eji ekike table table site na iji ihe eji eme akwa na -eme ma kpoo pulp, wee hazie ya ọzọ. Ọ nwere ike dochie metal na plastic maka ndị bi. Site n'ọmụma na-abawanye na nchedo gburugburu ebe obibi mmadụ, ihe ụmụ amaala China chọrọ maka ngwaahịa ndị nwere gburugburu ebe obibi na-abawanye, ahịa achọrọkwa nri ndị dị ka ahụike na nchebe gburugburu ebe obibi ka achọrọ maka ya.
N'ikwu banyere tebụl ahịhịa nkịtị a na-ahụkarị na ahịa, a na-eji ọkaibe ihe ubi eme ihe. Ngwaahịa emepụtara nwere ọria ndị ọzọ n'ọdịdị na agba aja aja na-acha ọcha.
Ihe oriri shuga dị larịị, nke ndị ahịa si mba ọzọ hụrụ n'anya, na-eji bagasse dị ka akụrụngwa. E nwere ụdị nri abụọ e mepụtara, otu dị ọcha, nke ọzọ bụ agba okpete, ya bụ, agba aja aja. Ọdịdị nke ngwaahịa ahụ esighi ike, dịka Eco Friendly Bagasse Pulp Tray.
Bamboo pulp tableware, ihe dị okpokoro dị ọnụ ala karịa n’ahịa, na-eji ntụpọ achara eke dị ka akụrụngwa. Ogo ngwaahịa a na-eduga na ụlọ ọrụ ahụ, ọdịdị ahụ mara mma ma dịkwa mfe, agba ahụ na-agba aja aja, ngwaahịa ahụ dịkwa ike.
Akpụ mpempe akwụkwọ Kraft mpempe akwụkwọ, tebụl kachasị ewu ewu na ahịa. Ngwaahịa ahụ na-eji akwụkwọ kraft eme ihe dị ka akụrụngwa, yana mkpuchi nwere. Usoro usoro a na-abụkarị usoro ofe ofe, nke nwere akara dị mma.